China Glass Fitsaboana Tavoahangy Ozinina, Glass Medical Famatsiana tavoahangy
Fonosana pharmaceutique 30ml 60ml 80ml 100ml 150ml 200ml 260ml manga fitaratra fanafody tavoahangy tavoahangy dia visy Cap
【Fitaovana avo lenta】Ireo tavoahangy fanafody vera siropia ireo dia vita amin'ny vera amber tsara tarehy tsara tarehy, sarony plastika mainty matevina ary tampony silicone mahatohitra harafesina.
【Arovy ny fanafody】 Ny tavoahangy pilina fitaratra dia manakana ny oksizenina ny fanafody.
【Tsara endrika】Namboarina tamin'ny malalaka malalaka, tsy handratra ny tananao rehefa manokatra izany.
【UV mahatohitra】 Ny tavoahangy fitaratra ara-pitsaboana vita amin'ny vera amberina mahatohitra harafesina.Ny tavoahangynay dia tsy misy BPA ary tsy misy firaka miaraka amin'ny vera amberina mahatanty UV mba hahazoana antoka fa ny siropianao. Ho voaro tsara sy tsara amin'ny taratra UV manimba ary mety hifoka haingana.
【Famolavolana tsy mitete】 Ny vavan'ny tavoahangy vita amin'ny visy dia mifanandrify amin'ny satroka firaka aluminium, izay mifanentana tsara ary afaka misoroka ny fivoahan'ny rano.
100ml 3oz Amber Syrup tavoahangy fanafody ranon-javatra am-bava fitaratra tavoahangy misy rano Cap
【Arovy ny fanafody】 Ny tavoahangy fanafody amber dia manakana ny oxidation ny fanafody.
【UV mahatohitra】 Ny tavoahangy pilina fitaratra dia vita amin'ny vera amberina mahatohitra harafesina.Ny tavoahangynay dia tsy misy BPA ary tsy misy firaka miaraka amin'ny vera amberina mahatanty UV mba hahazoana antoka fa ny siropianao. Ho voaro tsara sy tsara amin'ny taratra UV manimba ary mety hifoka haingana.
Tavoahangy Saosy Glass Bbq, tavoahangy ranom-boankazo, zava-pisotro misy tavoahangy vera, siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo, tavoahangy vera labiera, tavoahangy diffuser volotara,